Myanmar Daily Mail: တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်နိုဝင်ဘာတွင် အပူဇော်ခံကြချီမည် ၊ သီသင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ မန္တလေးမြို့လေးပြင်လေးရပ်ရှိ စေတီပုထိုးများတွင် ဆီမီး၊ ရေချမ်း၊ ပန်းကပ်လှူပူဇော်သူများဖြင့် စည်ကား ၊ ဆင်ခံ မြင်းခံ ဆင်းတုတော်များနဲ့ ပတ်သက်
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်နိုဝင်ဘာတွင် အပူဇော်ခံကြချီမည် ၊
သီသင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ မန္တလေးမြို့လေးပြင်လေးရပ်ရှိ စေတီပုထိုးများတွင် ဆီမီး၊ ရေချမ်း၊ ပန်းကပ်လှူပူဇော်သူများဖြင့် စည်ကား ၊
ဆင်ခံ မြင်းခံ ဆင်းတုတော်များနဲ့ ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းခြင်း.. ၊
ပါကစ္စတန်၏ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာလက်ရာများ ၊
အပယ်မကျနိူင်တဲ့ ကုသိုလ်(၇)မျိုး ၊
ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာ အသက်ထက် တန်ဘိုးကြီးသည် ၊
ကာမတဏှာ ကြောက်စရာ*** ၊
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရုပ်ထူတော် ၊
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် BIDC ဖလား ဖိတ်ခေါ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် မြန်မာလူငယ်အသင်း ထိုင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး ဗိုလ်စွဲ ၊
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်နိုဝင်ဘာတွင် အပူဇော်ခံကြချီမည်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ပင့်ဆောင် လာမည့် ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်နိုဝင်ဘာလအတွင်း အပူဇော်ခံရောက် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်ကို နေပြည်တော် ရှိ ဥပ္ပာတသန္တိစေတီတော်၌လည်းကောင်း၊ ရန် ကုန်မြို့တွင် ကမ္ဘာအေးလိုဏ်ဂူတော်မြတ်၌လည်း ကောင်း၊ မန္တလေးမြို့တွင် အတုမရှိကျောင်းတော် ကြီး၌လည်းကောင်း လှည့်လည်အပူဇော်ခံထား ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
""ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်ပင့်ဆောင်မယ့်ရက် အတိအကျကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ နှစ်နိုင် ငံရက်အရွှေ့အပြောင်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အစား ထိုးလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် ပင့်ဆောင်တဲ့ နိုင်ငံအတွက် အရမ်းအရေးတကြီး ဂရုစိုက်ရ တယ်""ဟု စွယ်တော်မြတ်ပင့်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်ကို ၁၉၅၆ခုနှစ် တွင်တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပင့်ဆောင် အဖူးမြော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပင့် ဆောင်ပူဇော်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူ ညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ သဘောတူလက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိ နေသေးခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကြချီလာ မည့်ရက်ကို အတိအကျမထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့၌ ဗုဒ္ဓစွယ် တော်မြတ် ပင့်ဆောင်ပူဇော်ရေးအတွက် အကြို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်ထား ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီသင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ မန္တလေးမြို့လေးပြင်လေးရပ်ရှိ စေတီပုထိုးများတွင် ဆီမီး၊ ရေချမ်း၊ ပန်းကပ်လှူပူဇော်သူများဖြင့် စည်ကား
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့၌ မန္တလေးမြို့ လေးပြင်လေးရပ်ရှိ စေတီပုထိုးများတွင် ဆီမီး၊ ရေချမ်း၊ ပန်းကပ်လှူပူဇော် ကုသိုလ်ယူကြသူများ၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များ၊ မြို့တွင်းသွားလာ လည်ပတ်သူများဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဘုရားဖူးများ အများဆုံးလာရောက်လေ့ရှိရာ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်၌ နံနက်လေးနာရီခွဲ၊ ဘုရားကြီးမျက်နှာသစ်တော်အမီ လာရောက်ဖူးသူများဖြင့် စည်ကားခဲ့ရာ ဘုရားဖူးမြော်လာရောက်သူများက မဟာမုနိဘုရားကြီးအား ရွှေသင်္ကန်း၊ ဆွမ်း၊ ရေချမ်း၊ ပန်း၊ ဖယောင်း ဆီမီး၊ ဆွမ်းတော်ကြီးတင် စသဖြင့် ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းတို့ပြုခဲ့ကြရာ နံနက်ခင်းပိုင်းမှစတင်၍ လပြည့်တစ်နေ့လုံးစည်ကားခဲ့သည်မှာ ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် ဆီမီးကပ်လှူပူဇော် ကုသိုလ်ယူသူများဖြင့် ညဦးပိုင်းအချိန်အထိ စည်ကားခဲ့သည်။
မန္တလေးတောင်တော်နှင့် တောင်ခြေရှိကုသိုလ်တော်၊ စန္ဒာမုနိ၊ကျောက် တော်ကြီးဘုရားသုံးဆူတို့၏ (၁၂၃) ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကြီး ကျင်းပချိန်ဖြစ်ရာ စည်ကားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ခံကုသိုလ်ယူတစ်ဦးက ''ကျောက်တော်ကြီးဘုရားမှာ နှစ်စဉ်ဆွမ်းသပိတ်ကပ်ပြီး ဆီမီးပူဇော်လေ့ရှိတာမို့ ဒီနှစ်လည်း ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်စည်ကားလေ့ရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမယ့် ဒီနှစ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာသူပိုများလာတယ်'' ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ပြင် မြို့ပေါ်ရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားများဖြစ်ကြသည့် ရွှေကျီးမြင်၊ အောင်တော်မူ၊ နန်းမြို့ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား၊ မဟာသကျသီဟဘုရား၊ စွယ်တော်မြတ်စေတီ၊ ပေါ်တော်မူဘုရားများတွင် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ အခမ်းအနားများ၊ သီလ ပေးတရားပွဲနှင့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပွဲများကိုလည်း မြို့လုံးအနှံ့ကျင်းပခဲ့ရာ ဆီမီးကုသိုလ်ယူသူ၊ အလှူဒါနပြုသူနှင့် တရားနာသူတို့ဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်။ ဧရာဝတီမြစ် ချော်ဆိပ်ဆိပ်ကမ်းဘေးရှိ လိုရာပြည့်စုံရန်မျိုးလုံပေါ်တော်မူမြတ်စွာဘုရား တွင်လည်း စိမ်းရောင်စို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြတ်နိုးသူတို့က ဧရာဝတီအဓွန့်ရှည်ပါစေဟူသော စာသားကို ဆီမီးစာလုံးဖော်ကာ ထွန်းညှိကုသိုလ်ယူခဲ့ကြသည်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့တွင် မဟာမုနိဘုရားကြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ ဆီမီးတစ်သောင်းပူ ဇော်ထွန်းညှိခဲ့ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်မှ လပြည့်ကျော်သုံးရက်နေ့အထိ စန္ဒာမုနိဘုရား၌ သံဃာတော်အပါး ၁၀၀ ကျော်၊ ကုသိုလ်တော်ဘုရား၌ သံဃာတော်အပါး ၁၀၀၀၊ ကျောက်တော်ကြီးဘုရား၌ ၆၃၇ ပါးတို့အား သပိတ်နှင့် စာရေးတံမဲများဖြင့် လောင်းလှူပူဇော်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဆင်ခံ မြင်းခံ ဆင်းတုတော်များနဲ့ ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းခြင်း..
(Aung Ko "ဘုရားအားလုံး ဆင်၊ မြင်း စသည့် သတ္တ၀ါတို့ကို စီးပြီး ခရီးသွားခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆင်ခံ ၊ မြင်းခံ ဘုရားရုပ်ထုများထုလုပ်ကြတာလဲမသိပါ။ အပြစ်ရှိ ၊ မရှိ။")
"အခု ချပ်ဝတ် ၀တ်ပေးနေတဲ့ မြင်းဟာ ရန်သူဗိုလ်ထုကို ထွင်းဖောက်ပြီး ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူရဲကောင်းလဲ သေရလိမ့်မယ်။ ငါ မြားမှန်ခံပြီး အပင်ပန်းခံပြီးတော့ ရန်သူဘုရင် ခြောက်ယောက်ကို ဖမ်းထား၇တာတွေလဲ အလကားဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ ငါလုပ်တဲ့ အလုပ်လဲ မပျက်စီးရအောင် အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူရဲကောင်းလဲ မသေရအောင် ငါအားတင်းပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ဘုရင်ကို ဖမ်းရမယ်"လို့ ကြံစည်ပြီးတော့ သူရဲကောင်းကို ခေါ်ပြီးတော့ "ငါ့ကို ချပ်ဝတ်ပြန်ဝတ်ပေးပါ။ ကျန်တဲ့ ရန်သူဘုရင်ကို ဖမ်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအား ငါ့မှာ ရှိပါသေးတယ်"လို့ ပြောပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ရန်သူဘုရင်ကို ဖမ်းဖို့ မြားဒဏ်ရာကြီးနဲ့ သူရဲကောင်းကို အကူအညီပေးခဲ့တယ်။
ဒီနေရာမှာ "အလောင်တော် ခွေးဘ၀လဲ ရောက်ခဲ့တာပဲ။ ခွေးဘ၀က ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလည်း ပုံဖော်တဲ့အနေနဲ့ ခွေးခံဆင်းတော်ကို ထုလုပ်ကြပါလား" လို့ ပြောစရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
သူများတွေကတော့ မသိဘူး။ ဦးဇင်းကတော့ ဆင်ခံ မြင်းခံ ဆင်းတုတ်ာတွေကို မြင်တိုင်း ဆင်ဘ၀ မြင်ဘ၀က အလောင်းတော်ရဲ့ ဥာဏ်ပညာ ဇွဲလုံ့လ ၀ိရိယတွေကို မြင်ယောင်လာပြီး ဘုရားရှင်ကို ဆထက်တစ်ပိုး ပိုလို့ပိုလို့ ကြည်ညိုလာမိပါတယ်။
အတွဲ ၂၇ ၊ အမှတ် ၅၃၁ ( ၁၉ - ၂၅ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၁)
နယူးယော့ခ်မြို့တွင် ကျင်းပသော ဗုဒ္ဓဘာသာအမွေအနှစ် အနုပညာလက်ရာပြပွဲ။ ဓာတ်ပုံ - အေအက်ဖ်ပီ
နယူးယော့ခ်- ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ လူသိအလွန်နည်းသော ထူးခြားသည့် ရှေးခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ရတနာ သိုက်ငယ်တစ်ခုကို နယူးယော့ခ် မြို့တွင် ရှေးခေတ် အနုပညာလက်ရာပြပွဲ အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ရာ ယင်းသို့ ပြသနိုင်ရန် ၎င်းရတနာသိုက်ငယ်မှ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းသည်ကမ္ဘာပေါ် သို့ ဖြတ်သန်း ရောက်ရှိမလာမီ ရေလွှမ်းမိုးမှု ဘေး အန္တရာယ်၊ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများနှင့် ပေါက်ကွဲလုအခြေအနေဖြစ်သောအမေရိကန်နှင့် ပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေများကို အန်တုကျော်ဖြတ်ခဲ့ ရသည်။
ကြီးမားသော အတားအဆီးကို အန်တု ကျော်ဖြတ်ရသည့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမွေအနှစ်ဖြစ်သော ဂန္ဓာရတိုင်း အနုပညာလက်ရာ ပြပွဲတွင် 'ကန်' ပြည်ထောင်စု၌ အများအားဖြင့် ကြည့်ရှု ဖူးမြော်ဖူးခြင်းမ ရှိသော ဆင်းတုတော် လက်ရာများအား ပြသခဲ့သည်။
ယခုသီတင်းပတ်တွင် အာရှအသင်း တိုက်၌ ပြသခဲ့သော ပန်းပုသုခုမ လက်ရာများသည် ခေတ်သစ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ဘက် တွင် တည်ရှိခဲ့ဖူးသော အစ္စလာမ်ခေတ် မတိုင်မီ ဂန္ဓာရတိုင်းဒေသ၏ မူးမေ့ လောက်အောင် ရှုပ်ထွေးသော သမိုင်းကြောင်းကို ခြေရာကောက် ၍ လှစ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဒေသသည် ယနေ့ခေတ်တွင် တာလီဘန် နှင့်ဆက်စပ်သော ပြောက် ကျားအုပ်စုများ၊ ပါကစ္စတန် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အစွန်း ရောက်ပုန်ကန်မှု များနှင့် ခွဲခြားမရသော ဆွက်တောင် ကြားဒေသတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းအနုပညာပြပွဲက ပေါ်လွင် ထင်ရှားစေသကဲ့သို့ပင် ဂန္ဓာရ ဒေသသည် ရှေးခေတ်တစ်ချိန်က အနု ပညာလက်ရာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ သန္ဓေသားငယ်ဖြစ် သကဲ့သို့ အင်ပါယာနယ်ချဲ့သည့် ဆုံးစမထင် သော တိုင်းကြီးပြည်ကြီးရှင် အဆက် ဆက်၏ နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ရန် ပစ်မှတ် အဆက်မ ပြတ်ဖြစ်လာသည်မှာ အလွန် တိုးတက်ထွန်းကားသော ခရစ်တော် မပေါ်မီ ၁၀၀ စုခေတ် (ဘီစီ-၁၀၀)မှ အေဒီ-၅၀၀ စုခေတ်တိုင် နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ နီးပါးအတွင်းဖြစ်ပေသည်။
"အခုခေတ် ပါကစ္စတန်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒပုံရိပ် ပေါ်လွင် ထင်ရှားနေတာဖြစ်ပေမယ့် အင်မတန် ရှေးကျတဲ့ ဒီဒေသရဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာ ဟာ ကွဲပြားတဲ့ ဘာသာအယူဝါဒတွေ အပေါ် သဘောထားကြီးကြီး လက်ခံတဲ့ အယူဝါဒအမျိုးမျိုး ထွန်းကားရာ ဒေသအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်"ဟု အာရှ အသင်းပြတိုက်၏ ဒါရိုက်တာ မယ်လစ် ဆာချူးက ပြောကြားသည်။
ကျောက်သား ပန်းပုလက်ရာများ ရွှေသားနှင့် ကြေးဝါလက်ရာများသည် တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာ အလွန်ကွာ ဝေးသော ဂရိ၊ ရောမ၊ အိန္ဒိယ၊ ပါရှား နှင့် အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တိုးတက်များပြားစွာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လက်ရာများ၏ ဩဇာသက်ရောက်မှုကို ပြသ လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယခုတိုင်ကျန်ရှိနေသည်ဟု သိရှိရသော ဗုဒ္ဓ၏ ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တော်မူသော ရုပ်တု တော် သုံးဆူ အနက် တစ်ဆူအပါအ၀င်ဖြစ်သော အခြားလက်ရာများသည် နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီ၍ မယိုယွင်း မပျက်စီးဘဲရှိခဲ့ရာ ယင်း တို့က အနုပညာဆိုင်ရာ ရောယှက်မှုနှင့် စမ်းသပ်တီထွင်မှုလက္ခ ဏာများကို ဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
(၁) ဘုရား တရား သံဃာ သံရဏဂုံသုံးပါး စွဲမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
(၂) ငါးပါးသီလမြဲသော ပုဂ္ဂိုလ်
(၃) အာရုံဆွမ်း နေဆွမ်း နေ့စဉ် လှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
(၄) စာရေးတံမဲ လှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
(၅) ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
(၆) ရေတွင်းရေကန် လှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
(၇) ကျောင်းဆောင်လှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များ သေရင် အပယ်မကျပါဘူး ဆရာတော်အရှင်ဇ၀နဟောကြားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံ တရားတော်များထဲမှာ နားကြားရလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် လှူတဲ့အခါမှာစိတ်ထားတက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရုပ်ထူတော်
1. Saint Bernadette of Lourdes, Died 1879 [Wikipedia]
St Bernadette was born Bernadette Soubirous in Lourdes, France. From February to July 1858, she reported eighteen apparitions of "a Lady." Despite initial skepticism from the Roman Catholic Church, these claims were eventually declared to be worthy of belief afteracanonical investigation. After her death, Bernadette's body remained "incorruptible", and the shrine at Lourdes went on to becomeamajor site for pilgrimage, attracting millions of Catholics each year.
2. Saint John Vianney, Died 1859 [Wikipedia]
St. Jean Baptiste Marie Vianney (May 8, 1786 – August 4, 1859) wasaFrench parish priest who becameaCatholic saint and the patron saint of parish priests. He is often referred to, even in English, as the "Curé d'Ars" (the parish priest of the village of Ars). He became famous internationally for his priestly and pastoral work in his parish due to the radical spiritual transformation of the community and its surroundings.
4. Saint Vincent de Paul, Died 1660 [Wikipedia]
6. Saint Veronica Giuliani, Died 1727 [Wikipedia]
Saint Veronica Giuliani (Veronica de Julianis) (1660-July 9, 1727) was an Italian mystic. She was born at Mercatello in the Duchy of Urbino. Her parents, Francesco Giuliana and Benedetta Mancini, were both of gentle birth. In baptism she was named Ursula. According to the Catholic Encyclopedia, she showed signs of sanctity from an early age. Her legend states that she was only eighteen months old, she uttered her first words to upbraidashopman who was servingafalse measure of oil, saying distinctly: "Do justice, God sees you."
7. Saint Zita, Died 1272 [Wikipedia]
8. Saint John Bosco, Died 1888 [Wikipedia]
Saint Don Bosco, born Giovanni Melchiorre Bosco, and known in English as John Bosco (August 16, 1815 – January 31, 1888), was an Italian Catholic priest, educator and recognized pedagogue, who put into practice the dogma of his religion, employing teaching methods based on love rather than punishment. He placed his works under the protection of Francis de Sales; thus his followers styled themselves the Salesian Society. He is the only Saint with the title "Father and Teacher of Youth".
9. Blessed Pope Piux IX, Died 1878 [Wikipedia]
10. Blessed Pope John XXIII, Died 1963 [Wikipedia]
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် BIDC ဖလား ဖိတ်ခေါ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် မြန်မာလူငယ်အသင်း ထိုင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး ဗိုလ်စွဲ